I-paroxysmal tachycardia ingenye yezinhlobo eziningi ze-arrhythmias zenhliziyo, lapho kukhona ukuguqulwa okungazelelwe komsebenzi wenhliziyo ekukhuphukeni kwenani lezinqamuzana zenhliziyo. Inombolo yokusikeka ingaba kusuka ku-140 kuya ku-200 ukushaya ngomzuzu.
Ngenxa yezinguquko kumvuthwandaba wokunyakaza okuvunyelweneyo, izinkinga ezihlukahlukene ze-hemodynamic zenzeka, ezithinta impilo enhle yesiguli. Ngesikhathi sokuhlaselwa, isigaba se-diastole siphazamiseka, siphuthuma, ngenxa yalokhu ama-ventricles enhliziyo ayanele, futhi i-paroxysm eqinile ngokuvamile ixhomeke ngegazi. Konke lokhu kubangela ukunciphisa izinkomba ezinjengokushaywa komzimba kanye nomthamo wamaminithi wegazi. Umzimba uyeka ukugcwala igazi, ukuswela kwawo okujulile kuzwakala yizinto ezenziwe nge-anatomical ezikude kwe-myocardium - ubuchopho, izinso, amathumbu, amaphaphu. Ngisho nemisipha yenhliziyo ngokwayo izwa ukulahlekelwa okujulile kwegazi kanye negesi echithwa kanye nezakhi ezikuyo. Uma i-tachycardia ye-paroxysmal ihlala isikhathi eside, kubika isithombe esibucayi kakhulu. Ngenxa yokunciphisa izitsha zomzila, ukugeleza kwegazi kubuyekwa kabusha, okuzama ukukhokhela ukusabalalisa okuphakathi bese ukwandisa ukucindezeleka okuwelayo. Uma izindlela zokubuyisela imali zihluleka, ukushaqeka komzimba, ukuhlasela kwe-angina pectoris, i-infarction ye-myocardial ingenzeka. Ukugeleza kwegazi emithambo ye-coronary kwenza inhliziyo iguquke kakhulu. Ukuguqula ukujikeleza kwegazi ezinhlobonhlobo zobuchopho kuholela ekuvumelaneni, ku-tishu yezintambo - ku-anuria. I-tachycardia yesikhathi eside i-paroxysmal ingaba yimbangela ye-necrosis emathunjini ezimweni ezimbi kakhulu.
Ukuqala kokuhlaselwa kwe- caroxac paroxysm akudluli iziguli ngokwabo. Bangasho ngokuqiniseka lapho kuqala, ngoba Kulo mzuzu, bazizwa becindezelekile endaweni ngemuva kwesifuba, nalapho sekuphelile, tk. Ukuphela kokuhlaselwa kuphuza ukushaya kwenhliziyo. Isibonelo sokuhlaselwa sibonakala: iziguli zibukeka ziyesaba, ziphaphathekile, zikhukhumele, zikhukhumele. Bangakwazi ukugijima ngesikhathi se-paroxysms, bengatholi indawo ngenxa yezinkathazo eziye zabafaka. Imivuthwandaba eminyene ivuvuka futhi ibonakale ikhupha ngezikhathi kanye ne-pulse.
Uma i-tachycardia ye-paroxysmal iqalwa yiziguli zodwa, ngokushesha kungekhona ukuhluleka kwenhliziyo, okuqhubekayo futhi engaphenduli emithini yokwelapha. Ngokuvamile izinhlobo ezimbili eziyinhloko zama-arrhythmias ahlukaniswayo: aphezulu futhi asebenza ngokweqile. I-Nadzheludochkovaya i-tachycardia i-tachycardia inezinketho eziningi ezihambisana nokuvela ngokuzumayo kwe-pathological foci ye-automatism, kanye nokuzijabulisa okuphindaphindiwe. Uma i-arrhythmia iyingozi kakhulu, lapho i-atrium ne-ventricles iqala ukunciphisa i-asynchronously, ukwehluleka kwenhliziyo kungaphatha ngokushesha futhi ngokucophelela.
I-paroxysmal tachycardia, ukwelashwa okumele kwenziwe ngaso sonke isikhathi, kunezici eziningana ezihlobene nhlobo kanye nohlobo oluthile lokuphazamiseka kwesigqi. Ngezinye izikhathi iziguli ngokwazo zingamisa uphawu lwabo oluvela ngokuzumayo. Ihlotshaniswa nesenzo esicacile kwi- vagus nererve. Ungaphonsa ikhanda lakho, chofoza endaweni ye-carotid projection, zama ukuphefumula noma ukushaya ngegebe lezwi elivaliwe, cindezela ama- eyeballs, thinta ibhaluni yerabha, ibhola noma usula ubuso ngama-cubes e-ice. Kuyinto enhle kakhulu ukufeza izinyathelo zokucabanga ngemuva kokuphathwa kokuqala kwe-beta-blockers, okukhulisa kakhulu ukusebenza kwazo zonke lezi zindlela. Ukwelashwa kwezidakamizwa kwenziwa kuphela ngaphansi kokuqondiswa odokotela oya khona.
Air ikhekhe ekhaya. Izimfihlo ukupheka meringues
WoW: Strange Uthuli neqhaza layo ekudaleni izintelezi